भ्रष्टाचारको कुरा आफूले बाहिर बोलेपछि ठूलो कम्पन आएको छ : डा. भट्टराई Nepalpatra
वीरगन्ज, असोज २६ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले ठूला पार्टीका अध्यक्षले गरेको भ्रष्टाचारबारे आफूले बोलेपछि ठूलो कम्पन आएको बताएका छन् । आज सोमबार पर्सामा आयोजित पार्टी प्रवेश तथा शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रममा उनले अर्बौंको घोटाला भएको दावी दोहोर्‍याएका छन् ।
उनले नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मिलेर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा ९ अर्ब रूपैयाँ घोटाला गरेको आरोप गृहजिल्ला गोरखा पुगेको बेला केही दिन लगाएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिपछि कांग्रेसले वक्तव्य प्रकाशित गरी भट्टराईलाई यसको प्रमाण देखाउन चुनौती दिएको थियो ।
भट्टराईले ओली, दाहाल र देउवाले ९ अर्ब कमिसन खाएर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अलपत्र पारेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरूले आयोजनाबाट अर्बौं रूपैयाँ कमिसन लिएर भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्न सकिने बताएका थिए । साथै उनले प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली गणतन्त्र र संघीयता विरोधी भएको आरोप पनि लगाएका थिए ।
उनले आज भ्रष्टाचारबारे आफूले बाहिर बोलेपछि प्रमाण देखाउन भन्दैछन् र बुढीगण्डकी, एनसेल, वाइडबडीमा अर्बौंको घोटाला भएको बताएका छन् । उनले अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर छानबिन गरिए यदि बाबुराम दोषी भए कारबाही भोग्न तयार भएको तर के तपाईंहरु तयार हुनुहुन्छ ? भनेर प्रतिप्रश्न गरेका छन् । उनले जनताले तिरेको कर लुट्न नपाइने बताउदै जन-लोकपाल गठन गरेर भष्टचारीको सम्पति जफत गर्ने र त्यो सम्पति विकास र समृद्धिमा लगाउने पार्टीको रोडम्याप रहेको सुनाएका छन् ।